Ciidamo ka tirsan AMISOM oo la wareegay Xafiisyada Maamulka Gobolka Hiiraan. – XAMAR POST
Ciidamada AMISOM ayaa la wareegay amaanka Xafiisyada Maamulka Gobolka Hiiraan oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen Ciidamo ka amar qaata Gudoomiyahii xilka laga qaaday Yuusuf axmed Hagar Dabageed.
Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa albaabka hore ee Xaruunta looga arimiyo Gobalka Hiiraan lama oga ujeedada ka dambeysa la wareegida Xaruunta Gobalka gobolka hiiraan ee ciidanka AMISOM.
Wali waxaa Magaalada Baledweyne ka jirta Xiisadii ka dhalatay xil ka qaadidii uu Madaxweynaha Hirshabelle ku sameeyay Gudoomiyahii hore gobolka hiiraan Yuusuf Dabageed.
Shalay dagaal Khasaare geystay ayaa duleedka Magaalada Baledweyne ku dhexmaray ciidamo kala taabacsan Yuusuf Dabageed iyo Ciidanka Amaanka Hirshabeelle, waxaana magaalada ka taagan xiisad ka dhalatay Xilka qaadista Yuusuf Dabageed.
AMISOM oo sheegtay in ay xirtay Nin Miino ku aasayay Sh.Hoose